သားသားမီးမီးတို့ကို စိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေကျ ဗိုက်ဗိုက်ပြဿနာတွေအကြောင်း - Page7of 85 - Hello Sayarwon
ကလေးက တစ်ချိန်လုံး ငိုနေတယ်။ ဂျီပဲကျနေတယ်။ စိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုတဲ့ မေမေတွေ ရှိလား။ သားသားမီးမီးတို့က သူတို့ခံစားနေရတဲ့ ပြဿနာကို လူကြီးတွေလို လုံးစေ့ပတ်စေ့ မပြောပြနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် မအီမသာ ခံစားနေရတဲ့အခါ သူတို့ဖော်ပြမှာက ငိုတာ၊ ဂျီကျတာလိုမျိုး အမူအရာလေးတွေနဲ့ပါ။
သားသားမီးမီးတို့အရွယ်မှာ အများဆုံး မအီမသာဖြစ်စေတဲ့ ပြဿနာက ဝမ်းဗိုက်လေးရဲ့ ပြဿနာပါ။ ဝမ်းချုပ်တာက၊ လေပွတာတွေက လူကြီးတွေမှ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ သားသားမီးမီးတွေလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဗိုက်ဗိုက်ကလေးမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်လို့လဲလို့ သိချင်နေပြီလား မေမေ…?
သားသားမီးမီးတို့ ဗိုက်ဗိုက်လေးမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေက ဘာတွေများလဲ
သားသားမီးမီးတို့ဟာလည်း လူကြီးတွေလို အစာခြေစနစ်ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဗိုက်ဗိုက်ကလေးမှာ အခုလို ပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေက သူတို့မှာ မအီမသာဖြစ်နေတာမျိုးကိုကောင်းကောင်းမဖော်ပြတတ်ပါဘူး။ စားလိုက်တဲ့အစားအစာက အစာကြေခဲတာ၊ အအေးမိထားတာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ အစာမကြေတာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အစာမကြေတာက လူကြီးတွေမှာတောင် ခံစားရခက်တဲ့ ပြဿနာမဟုတ်လား။
ကလေးတွေမှာ ရောဂါပိုးတစ်ခုခုကူးစက်ခံရတာကြောင့် အန်တာက အများဆုံးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ကလေးတွေကို ကျွေးတဲ့အစားအစာတွေ၊ ကလေးကိုကျွေးမွေးရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကသန့်ရှင်းမှုအားနည်းတာကြောင့် ရောဂါပိုးတွေကပ်ငြိနေတာကနေတစ်ဆင့် ကလေးရဲ့ ဝမ်းထဲရောက်ပြီးအော့အန်တာတွေဖြစ်လာရပါတယ်။
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတာတော့ သိသိသာသာမြင်နိုင်တဲ့ ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ပြဿနာပါ။ ကလေးက ဝမ်းအရည်တွေသွားနေမယ်။ တစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ်ထက်မက နောက်ဖေးသွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ သားသားမီးမီးက ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်နေပါပြီ။
အစားအစာဓာတ်မတည့်တာက စားလိုက်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုခုကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တဲ့ အခါမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ အစာခြေစနစ်ပြဿနာတစ်မျိုးပါ။
စားချဉ့်ပြန်ရောဂါက ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ အစာခြေစနစ်ဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုပါ။ ကလေးအများစုမှာတော့ အစာခြေစနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကနှေးပါတယ်။ ကလေးလေးတွေရဲ့ အစာရေမျိုက ဖွံ့ဖြိုးနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် အစာအိမ်ထဲက အစာခြေရည်တွေက အစာရေမျိုပြွန်ကနေ အလွယ်တကူပြန်ဆန်တက်လာတာပါ။
ဒီပြဿနာတွေက သားသားမီးမီးတို့ကို မအီမသာ ခံစားစေရပြီး ငိုတာ၊ ဂျီကျတာတွေ ဖြစ်လာစေရတာပါ။ ဒါတွေအပြင် အာဟာရ ပြည့်ဝစွာ မရရှိမှုက ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု နဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကိုပါ ထိခိုက်စေလာတာပါ။
ဒီပြဿနာတွေကို ကာကွယ်လို့ ရလား …
ကာကွယ်လို့ ရလားဆိုတော့ သိပ်ရတာပေါ့။ ပြဿနာတိုင်းအတွက် အဖြေဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ဒီတော့ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဗိုက်ဗိုက်လေး ပြဿနာ ကင်းစေဖို့ဆိုရင် နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကို ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပိုးမွှားတွေကို စွမ်းစွမ်းတမံ တိုက်ခိုက်နိုင်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား အာဟာရ (Prebiotics) ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်လို ထောက်ပံ့ပေးရမလဲဆိုပြီး တွေးနေပြီလား……….
အရမ်းခေါင်းရှုပ် မသွားပါနဲ့။ သားသားမီးမီးတို့ အစာခြေပြဿနာကင်းစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယား အာဟာရကို ကလေးတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် အစားအစာလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်၊ အာဟာရဖြည့်နို့၊ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယာအာဟာရ ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ စီရီယယ်တွေကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဗိုက်ဗိုက်ပြဿနာ ကင်းပြီး ကျန်းမာထက်မြက်တဲ့ သားသားမီးမီးတို့ ဖြစ်စေဖို့ နေ့စဉ် Prebiotics ကို ဖြည့်ပေးစို့နော် မေမေတို့ရေ…………
Pediatric Intestinal Disorders https://www.childrens.com/specialties-services/conditions/intestinal-disorders Accessed Date 12 November 2020
Childhood Bowel Problems https://www.bladderandbowel.org/bowel/bowel-problems/childhood-bowel-problems/ Accessed Date 12 November 2020